ဆယ်လီနာဂိုးမက်စ်ရဲ့ အချစ်သစ်က အချစ်စစ်ဖြစ်လာပြီလား ? - Myanmarload
ဆယ်လီနာဂိုးမက်စ်ရဲ့ အချစ်သစ်က အချစ်စစ်ဖြစ်လာပြီလား ?
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 20:50 March 02, 2017
ဆယ်လီနာဂိုးမက်စ် ကတော့ ခြေလှမ်းသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပြန်ပါပြီ ... သူမရဲ့ချစ်သူသစ် The Weekend ကို မိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာပါ ... အသက် 24 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆယ်လီနာဟာ 27 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဆိုတော် The Weekend နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြောင်း Social Media က တရားဝင်ထုတ်ဖော်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရူးရူးမူးမူး ချစ်နေကြတဲ့ပုံတွေ တွေ့လာရပါတယ် ... နှစ်ဦးသား အချိန်တွေအများကြီးအတူတူကုန်ဆုံးခဲ့ကြတာပါ ... ယခုလဲ ဆယ်လီနာဟာ သူမရဲ့ချစ်သူကို မိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့ ...
The Weekend က ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး နွေးထွေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ ဆယ်လီနာရဲ့မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေမှာသေချာပါတယ်လို့ အတွင်းလူတစ်ယောက်ကလဲ ပြောကြားထားပါတယ် ... သူတို့နှစ်ဦး စတင်တွဲခုတ်ချိန်ကစ ဆယ်လီနာရဲ့ ချစ်သူဟောင်း ဂျက်စတင်ဘီဘာဟာ The Weekend ရဲ့သီးချင်းတွေအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလို The Weekend ရဲ့ချစ်သူဟောင်း စူပါမော်ဒယ် ဘယ်လာဟက်ဒီးကလဲ ဆယ်လီနာကို လူမှုကွန်ယက်မှာ unfriend ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသည်းကွဲနေကြောင်းကိုလဲ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ... ပရိတ်သတ်တို့ရော ...
ဆယ်လီနာ နဲ့ The Weekend တို့ အတွဲကို သဘောတူကြလား ?